Saripika - Tambajotra Meteorolojia | Web Meteorology (Pejy 2)
Curiosities 24 momba ny Antarctica
Inona no fantatrao momba ny efitra efitra lehibe indrindra eto an-tany? Azo antoka fa misy zavatra 24 farafaharatsiny mbola tsy fantatrao. Ampidiro ary ahita curiosities 24 momba ny Antarctica.
Cielomoto, horohoron-tany miseho eny amin'ny habakabaka ary ho azy dia mbola tsy misy fanazavana lojika. Fantaro misimisy kokoa momba an'io toetr'andro io
Ny hakanton'ny Antarctica mahavariana, tandindomin-doza
Ny iray amin'ireo faritra tsara tarehy sy mahavariana indrindra amin'ny planeta, Antarctica, dia tsy avela ho tandindomin-doza noho ny fiakaran'ny maripana.
Taorian'ny rivo-doza: sary
Fanangonana sary, nalaina tany Etazonia, izay manampy antsika hahatakatra ny fomba fiatrehan'ireo voakasik'izany ny fandalovan'ny rivodoza.
Sarin'ny fahasimbana nateraky ny Rivo-doza Andrew tamin'ny 1992
Sarin'ny faharavana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Andrew (izay nahatratra ny sokajy avo indrindra, 5) tamin'ny 1992 tany amin'ny faritr'i Miami sy tany amin'ny faritra atsimon'i Louisiana.
Tafio-drivotra eto Dubai
Sary sy horonan-tsary momba ireo rivo-pasika mahatalanjona mitranga any Dubai.
Ny trangan'ireo Masoandro telo
Sarin'ilay trangan-javatra meteorolojika fantatra amin'ny anarana hoe "trangan'ireo Masoandro telo"
Raha ny filazan'ny WMO, ny Cumulonimbus dia faritana ho rahona matevina sy matevina, miaraka amina fivoarana avo be, miendrika tendrombohitra na tilikambo goavambe. Izy io dia mifandray amin'ny tafio-drivotra.
Ny trangan-javatra mahatsiravina indrindra any Aostralia
Saripikan'ny toetr'andro mahatalanjona indrindra any Aostralia
Ny rahona cumulus dia rahona mivoatra miandalana noforonina tamin'ny alàlan'ny onja mitsangana ankafizin'ny fanafanana ny rivotra ambonin'ny tany.
Ny stratus dia misy vongan-drano kely na dia ambany aza ny maripana ambany dia mety misy poti-dranomandry kely.
Andry hazavana, vokarin'ny hazavana tsara tarehy
Andry hazavana, vokatra mamirapiratra tsara izay miseho voajanahary rehefa ny ranomandry eny amin'ny habakabaka dia taratry ny hazavan'ny Volana, ny Masoandro, na ny hazavana avy amina loharano artifisialy
Nimbostratus dia faritana ho toy ny rahona matevina, maizina matetika, miaraka amin'ny fisehoana voasaron'ny ranonorana na oram-panala izay milatsaka bebe kokoa na latsaka avy eo.
Altocumulus dia sokajiana ho rahona antonony. Ity karazana rahona ity dia faritana ho toy ny banky, sosona manify na rahona matevina miforona amin'ny endriny maro karazana.
Ny hazo Cirrocumulus dia misy banky, sosona manify na ravin'ny rahona fotsy, tsy misy aloka, mifangaro amin'ny singa kely dia kely. Mampiharihary ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ambaratonga misy azy ireo izy ireo.
Ny Cirrus dia karazana rahona avo, matetika amin'ny endrika filament fotsy vita amin'ny kristaly ranomandry.